Netromycin (နီထရို မိုင်စင်) - Hello Sayarwon
Netromycin (နီထရို မိုင်စင်)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Netromycin (နီထရို မိုင်စင်)
Netromycin (နီထရို မိုင်စင်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Netromycin (နီထရို မိုင်စင်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Netromycin (နီထရို မိုင်စင်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Netromycin® (netilmicin sulfate) သည် ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်စေသော ဘက်တီးရီးယားပိုးများကို သေစေသော aminoglycoside ပိုးသတ်ဆေး အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။
Netromycin (နီထရို မိုင်စင်) ကိုဘယ်လို သုံးသင့်ပါသလဲ။
Netromycin® (netilmicin sulfate) သည် အသားထဲ သို့မဟုတ် သွေးပြန်ကြောထဲ ထိုးသွင်းရသော ဆေးအမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်က ထိုးပေးပါသည်။
Netromycin (နီထရို မိုင်စင်) ကိုဘယ်လိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားသင့်ပါသလဲ။
Netromycin® (netilmicin sulfate) ကို အခန်းအပူချိန် မှာသိမ်းပါ။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Netromycin® (netilmicin sulfate) ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Netromycin® (netilmicin sulfate) ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Netromycin® (netilmicin sulfate) ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Netromycin® (netilmicin sulfate) ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Netromycin (နီထရို မိုင်စင်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Netromycin® (netilmicin sulfate) ထဲတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
ကလေးငယ်များတွင် ထိုဆေးကို ၂ ပတ်ထက် ပိုပြီး ထိုးလျှင် အထူးသတိပြုသင့်ပါသည်။
Netromycin (နီထရို မိုင်စင်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
မျက်စိ အမြင် အာရုံများ မကောင်းခြင်း
သွေးတွင် အယ်ကာလီ ဖော့စဖိတ်များခြင်း
သွေးနီဥ၊ သွေးဖြူဥ၊ သွေးမွှားဥများ နည်းခြင်း
ထို့ပြင် သေစေလောက်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ ကျောက်ကပ်အဆိပ်သင့်ခြင်း၊ နား အဆိပ်သင့်ခြင်းနှင့် ပြင်းထန်စွာ ဓါတ်မတည့်ခြင်း (အနီဖုများထွက်ခြင်း၊ အင်ပြင်ထခြင်း၊ယားယံလာခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်လာခြင်း၊ ရင်ကျပ်ခြင်း၊နှုတ်ခမ်း ၊ လျှာနှင့် လည်းချောင်းများရောင်ရမ်းလာခြင်း)ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Netromycin (နီထရို မိုင်စင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Netromycin® (netilmicin sulfate) ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။) အောက်ပါတို့သည် Netromycin နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သောဆေးများ ဖြစ်ပါသည်။
Iron Sulfate (သံဓါတ်အားဆေး)
ဗီတာမင် B Complex 100 (ဗီတာမင်အားဆေး)
ဗီတာမင် C (ascorbic acid)
ဗီတာမင် K (phytonadione)
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေကNetromycin (နီထရို မိုင်စင်)နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Netromycin® (netilmicin sulfate) က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကNetromycin (နီထရို မိုင်စင်)နဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိမလဲ။
Netromycin® (netilmicin sulfate) ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကြွက်သားများ အားနည်းခြင်း၊ အာရုံကြောနှင့် ကြွက်သားဆိုင်ရာ ရောဂါများဖြစ်ခင်းတို့ရှိလျှင် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Netromycin (နီထရို မိုင်စင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 4–6 mg/kg နေ့စဉ် တကြိမ် သို့မဟုတ် ၈ နာရီမှ ၁၂ နာရီခြား ဖြစ်ပါသည်။
ပြင်းထန်သော ရောဂါများတွင် 7.5 mg/kg နေ့စဉ် ၈ နာရီခြား ဖြစ်ပါသည်။ (သက်သာလာလျှင် ၄၈ နာရီအတွင်း ဆေးပမာဏ လျှော့နိုင်ပါသည်။)
ကလေးငယ်တွေမှာNetromycin (နီထရို မိုင်စင်)အချိုးအစားကဘယ်လောက်လဲ။
လမစေ့သော ကလေးများနှင့် ၁ ပတ်သားများအထိ
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ3mg/kg နေ့စဉ်ှ၁၂ နာရီခြား ဖြစ်ပါသည်။
၁ ပတ်ကျော်မှ ၁ နှစ်သားများအတွက်
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 2.5–3 mg /kg နေ့စဉ်ှ၈ နာရီခြား ဖြစ်ပါသည်။
၁ နှစ်အထက် ကလေးများအတွက်
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 2–2.5 mg /kg နေ့စဉ်ှ၈ နာရီခြား ဖြစ်ပါသည်။
Netromycin (နီထရို မိုင်စင်)ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးအချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ရရှိနိုင်မလဲ။
Netromycin® (netilmicin sulfate) ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Netromycin® (netilmicin sulfate) ၁၀၀ မီလီဂရမ် အသားထိုးဆေး၊ အကြောထိုးဆေး
Netromycin® (netilmicin sulfate) ကို လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးထိုးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ် ထိုးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲထိုးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုး တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Netromycin®. http://www.mims.com/india/drug/info/netilmicin?type=full&mtype=generic. Accessed December 19, 2016
Netromycin®. https://www.drugs.com/sfx/netilmicin-side-effects.html. Accessed December 19, 2016
Netromycin®. http://www.medsplan.com/DrugsDetailsPage/Netromycin-100mg-/Netilmicin. Accessed December 19, 2016
Netromycin®. http://www.tabletwise.com/southafrica/Netromycin-injection/precautions. Accessed December 19, 2016